विदेशीको प्रभावमा हिन्दूधर्म समाप्त गर्न पाइन्छ ?(भिडियोसहित) « Janata Samachar
प्रकाशित मिति : 26 March, 2019 10:05 am
२०६२,०६३ सालको जनआन्दोलनपछि मुलुकबाट राजतन्त्र समाप्त भइसकेको छ । धर्मनिरपेक्षता र संघीयतासहितको गणतन्त्र स्थापना भएको छ । राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टीले हिन्दूराज्य र संवैधानिक राजतन्त्रको ऐजण्डा जोडदार रुपमा उठाउँदै आएको छ । जुन देशको संविधान विपरीत छ । त्यसको नेतृत्व अध्यक्ष कमल थापाले गरिरहनु भएको छ । मुलुकबाट बिस्थापित भइसकेको राजतन्त्र फेरि किन चाहियो ? हिन्दूराज्य नै बनाउनुपर्ने कारण के हो ? अध्यक्ष थापाले जनता टेलिभिजनको द भ्यू विचारमन्थनमा त्यसबारे खुलस्त पार्नुभएको छ । थापाले व्यक्त गर्नुभएकाे विचारलाई समेटेर नरेश न्यौपानेले तयार पार्नुभएको सारसंक्षेप :
हिन्दूधर्म र राजतन्त्रको भारी बोकेर तपाई कतातिर जान लाग्नुभएको हो ?
नेपालमा २००७ सालमा नै प्रजातन्त्रको स्थापना भएको भए पनि ७ दशक बितिसक्दा पनि हामीले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सकिइरहेका छैनौं । देशको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकेका छैनौं । यसको मुख्य कारण हरेक पटकका परिवर्तनमा कुनै न कुनै शक्ति निषेध हुने क्रम निरन्तर चल्यो र त्यसमा ०६३ सालको परिवर्तन पनि अछुतो रहन सकेन । जसले गर्दा आज १२ वर्षको राजनीतिक अभ्यासपछि पनि जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । यसकारण आज सबै नेपाली अटाउने राजनीतिक प्रणालीको आवश्यकता देखेर हामी संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दूराज्यको पक्षमा क्रियाशील छौं ।
निषेधित कसरी ? बरु मुलुकमा सम्पन्न सबै चुनावमा सहभागL हुँदै अहिले एक सिटमा खुम्चिँदा आफ्ना एजेण्डाबारे समीक्षा गर्नुपर्दैन ?
मैले यहाँ मेरो पार्टी र मलाई निषेधित गरियो भन्न खोजेको होइन । ६२, ६३ को परिवर्तनपछि परिवर्तनकारीहरुका एजेण्डा अनुसार अहिले देशमा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र छ । जसरी ०४६ सालको परिवर्तनपछि बहुदलीय व्यवस्था भएपनि माओवादी वैचारिक रुपमा अटाउन सकेन, त्यस्तै ०६२,०६३ सालको परिवर्तनपछि ठिक बेठिक जे होस, परम्परागत शक्ति चाहे त्यो संस्थाको रुपमा राजतन्त्र होस, चाहे त्यो मूल्य र मान्यताको कोणबाट हाम्रा मूल्य, मान्यता र संस्कृति होस् । त्यो अहिले उपेक्षित छ ।
तर दुनियाँका कुनै पनि पुराना शक्तिले आफ्नो सार्थकता गुमाउन पुग्दा नयाँ शक्तिले आफ्ना एजेण्डा अनुसार चल्न त पाउँछन नि ?
तपाईइको कुरामा म असहमत छैन । नेपालको सात दशक लामो राजनीतिलाई नियाल्दा कुनै पनि शक्ति लामो समय टिकेको छैन । यसबाट पाठ सिक्दै नेपालमा राजादेखि विप्लवसम्म अटाउने राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । यो गर्न सकिन्छ र यो नै नेपालको वृहत्तर हितमा हन्छ ।
राजनीतिको भाषामा यतिधेरै घोर दक्षिणपन्थी र घोर वामपन्थी भनिने शक्तिहरु एउटैमा अटाउने प्रणालीको नेपालमा सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
हरेक पार्टीका आफ्ना आफ्ना विचार, दृष्टिकोण र एजेण्डा भएपनि यसको सम्भावना छ । अहिलेको लोकतन्त्रमा राजसंस्था छैन । अहिलेको प्रणालीभन्दा त बाहिर छ नि । जसको राष्ट्र निर्माणमा निकै ठूलो भूमिका छ, त्यो संस्थालाई पनि समेटेर जान सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला ।
तर राजतन्त्र मुर्दावादका नारा सडकमा धेरै लागेपछि आजको स्थिति आएको होइन र ?
त्यतिबेला म गृहमन्त्री थिएँ . राजतन्त्रविरुद्धको नारा म आफैँले सुनेको थिएँ । । त्यो नारा भारतको चाहना अनुसार लगाइएको थियो । त्यसको आधारभूमि भारतको राजधानी नयाँदिल्ली थियाे । भारतीय शासकको प्रत्यक्ष सहयोग, संलग्नता र प्रायोजनमा भएको १२ बुँदे सहमति र दुई विपरीत ध्रुवमा हिडेका राजनीतिक शक्तिबीच समझदारी रहेको थियो । उनी बीचमा भएको समझदारीको कतैपनि गणतन्त्रको ‘ग’ लेखिएको छैन । तपाईलले भनेजस्तै आन्दोलनको आँधिबेहेरी सिर्जना भएर वा दरबारबाट राजालाई निकालेर भएको हो र ?
क्रान्तिका विभिन्न रुप हुन्छ, फ्रान्समा राजा काटिए जस्तै नभएपनि जनताको ठूलो शक्तिले राजालाई तिमी बिदा हौ त भनेको हो नि ?
तपाईले बाहिर चलेका हल्लाका आधारमा कुरा गरिरहनुभएको छ । मैले तपाईलाई अघि नै प्रश्न गरें कि, आन्दोलनको अन्त्य कसरी भयो ? ०६२ सालको वैशाख ११ गते दल र दरबारबीचमा सम्झौता भएर त्यो आन्दोलन टुंगिएको हो ।
तर राजाले घुँडा टेके र आन्दोलनले सफलता पाएको भनिन्छ नि ?
यस्ता सतही कुराको मसँग जवाफ छैन । आन्दोलन जे जस्ता माग राखेर गरिएको भएपनि त्यसको परिणाम त त्यो कहाँ गएर टुंगियो ? भन्ने हो । सम्झौता गरेर टुंग्याउने, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाएर नयाँ सहमति गर्ने भनेर सम्झौता गर्ने अनि राजाले हारे भन्न सुहाउँछ ?
तपाईले यहि संविधान मानेर शपथ खानुभएको छ, परराष्ट्र मात्रै होइन उपप्रधानमन्त्री समेत बन्नुभयो, यो संविधानमा तपाईहरुको स्थान छैन भन्न मिल्छ ?
स्थान भएर त हामी राजनीतिक रुपमा क्रियाशील रहेका छौं । संविधानको आत्मा भनेको विचार स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, सरल ढंगबाट संविधान संशाेधन गर्न पाउने र फरक विचार बोकेका कारण पार्टीमाथि प्रतिबनध लगाउन नपाउने व्यवस्था हुन् । र जहाँसम्म धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता छन् , यी राजनैतिक अवस्था र व्यवस्था हुन् । यी ४ वटा स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गरेर जनताको अभिमतबाट गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता पनि हटाउन पाइन्छ । प्रजातन्त्र भनेकै भिन्न भिन्न विचारबीचको प्रतिस्पर्धा हो । यसले लोकतन्त्रलाई बलियो नै बनाउँछ ।
यहाँले जनमतबाट नै फिर्ता गर्न सकिन्छ भनेका एजेण्डा र विराट राष्ट्रिय एकताको सवाललाई तपाईहरुमा भइरहेको टुटफुट हेर्दा त्यो सम्भावना त देखिदैन ?
तपाई आजको कुरा गरिरहनुभएको छ तर म भोलि सम्भावनाको कुरा गरिरहेको छु । विल्कुल सम्भावना छ । राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रलाई पाखा लगाएको पछिल्लो १२ वर्ष मुलुकको हालत के भयो ? तपाईललाई थाहा छ नि । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक देश विखण्डनको आवाज उठेको छ । गरिबी र बेराजगारी समस्या इतिहासमै सबैभन्दा विकराल भएको छ । लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र चलिरहेको छ र भैष्टाचारले सीमा नाघेको छ । नेपालको सनातन धर्म र संस्कृतिमाथि संगठित र योजनावद्ध रुपमा आक्रमण भइरहेको छ । लोकतन्त्रकै आवरणमा सर्वसत्तावादका प्रारम्भिक संकेत देखा परेका छन् । १२ वर्ष पछाडि फेरि नयाँ रुपमा माओवादी युद्धको विजारोपण गरिंदैछ । अब आफै बुझ्नुहोस कत्तिको सम्भावना छ ।
के आज उठिरहेको भनिएको विखण्डनको मुद्धा राजा रहेको वा नरहेको विषयसँग सम्बन्धित छ ? जस्तो राजा नभएका सोभियत संघ लगायतका देश पनि टुक्रिएका छन नि ?
सोभियत संघ र नेपालको कुरा एउटै होइन । नेपालमा ठूला ठूला परिवर्तन भए । राणा आयो र गयो त्यसपछि प्रजातन्त्र आयो । पञ्चायत आयो र गयो । यति ठूला परिवर्तन हुँदा कहिल्यै बिखण्डनका कुरा उठेको थियो ? किन अहिले मात्र उठ्यो ? यो गम्भीर बिषय होइन ? नेपाल दुई महाशक्ति देशहरुको बिचमा छ । यहाँ उनीहरुका स्वार्थले काम गर्छन । उनीहरूकाे स्वार्थ पूरा गर्ने नाममा जायज नाजायज रुपमा यहाँका राजनीतिक शक्ति प्रयोग भइरहन्छन् । राजसंस्था नहुँदा देश अभिभावक विहीन भएको छ र बिखण्डनको आवाज उठिरहेको छ ।
तपाई समानता र सार्वभौमसत्ता मान्छु भनिरहेको कमल थापा अथवा जनताको छोरो राष्ट्रपति बन्दा के हुन्छ ? कि कुनै एक वंशको पक्षमा पैरवी गरिरहनुभएको छ ?
जनताको छोरा राष्ट्रपति हुने कुराको सैद्धान्तिक महत्व होला । तर राष्ट्र रहे न राष्ट्रपति हुने होला ?
कमल थापा लगायतका हजारौं नेपाली जनताका छोराछाेरीले राष्ट्र जोगाउन नसक्ने तर एउटा कुनै परिवार वा वंशले राष्ट्र जोगाउन सक्छ भन्ने तर्क आज कत्तिको सान्दर्भिक होला, हाँस्यादपद भएर न र ?
तपाईलाई किन हास्यास्पद लाग्यो, त्यो त मलाई थाहf भएन । बेलायतका अहिले पनि प्रतिकात्मक राजतन्त्र छ । महारानी छन् तर त्यहाँका जनता खुशी नै छन् । जापान र थाइल्याण्डमा राजा छन् । त्यहाँका जनता पनि खुशी नै छन् । नेपालको जुन किसिमको भूराजनीतिक अवस्था छ, यहाँ चुनाव भन्दा माथि उठेको राजतन्त्र आवश्यक नै हुन्छ । यो कुरा मैले मात्रै भनेको होइन, विपी कोइराला यो विचारको पहिलो नेता हुनुहुन्थ्यो ।
तपाईले राजतन्त्र नभएकोले बेरोजगारी पनि बढ्यो भन्नुभो, विदेशको श्रमबजार सस्तो भएर युवा विदेशिएका होलान् नी ? यसमा राजतन्त्र हुनु र नहुनुको के सम्बन्ध छ ?
म केवल राजतन्त्रको मात्रै कुरा गरिराखेको छैन । २०६२,०६३ को परिवर्तनपछि दशलाई जुन बाटोबाट हिंडाउन खोजियो, त्यो मार्ग त्रुटिपूर्ण छ भन्ने हो । राजसंस्था त एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै हो ।
यहाँलाई किन हिन्दूराज्य नै चाहिएको ?
किनभने नेपाल हिन्दूराज्य थियो । नेपालमा हिजाे जे हो त्यहि चाहियो नि । पश्चिमा मुलुकहरुले इम्प्लान्ट गरेको वौद्धिक आतंकको यो प्रभाव हो । जबकि कतिपय पश्चिमा मुलुकहरु आफै धर्मसापेक्ष छन् । विश्वमा ४० देश इस्लाम धर्म सापेक्ष छन् ।
त्यसो भए के तपाई हिन्दूधर्मको मान्यता अनुरुप नेपालको कानुन बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ ?
बिल्कुल होइन । हामीले हिन्दूराष्ट्रको कुरा गरेर धर्मको आधारमा कानुन बनाउने,शासन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पटक्कै होइन । हामीले पूजा, आराधना जस्ता धार्मिक कर्मकाण्डको कुरा पनि गरेका होइनौं । यो त नेपालको राष्ट्रिय पहिचानको सवाल हो । यसको पहिचान र आधार भनेको सनातन धर्म र संस्कृति हो । जसरी अमेरिका र युरोप क्रिस्चियन मान्यता छ, हाम्रो पनि आफ्नै पहिचान यो हो । हामीले ९४ प्रतिशत जनताको पहिचान चाहेका हौं । यो हाम्रो देशको पहिचानसँग सम्बन्धित कुरा हो । त्यसैले धार्मिक स्वतन्त्रता दिने हो धर्मनिरपेक्षता होइन । हाम्रो कुरा भनेको धार्मिक स्वतन्त्रता र समानतासहितको हिन्दूराष्ट्र कायम गरिनुपर्छ भन्ने हो । राष्ट्रको परिचय हिन्दूराष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्न्नुको मतलव कसैले अन्य धर्म मान्नुपर्छ भनेको पनि होइन । अर्को कुरा यसमा जनमत संग्रह गरौं न । अन्य कुरामा त हामी लोकतन्त्र भन्छौ नि । संविधानमा सुझाव माग्ने बेलामा बहुसंख्यक नेपालीले हिन्दूराष्ट्र भनेका होइनन र ? विदेशीको प्रभावमा हिन्दूधर्म समाप्त गर्न पाइन्छ ? हाम्रो एकताको आधार हो नि हिन्दूधर्म ।
पाकिस्तान र बंगलादेशको एउटै धर्म भएर पनि एकता हुन नसकेको उदाहरण पनि छ, आजको युगमा धर्मलाई पनि एकताको आधार मान्नु पश्चगमनको पराकाष्ठा भएन ?
पाकिस्तान र बंगलादेश विभाजन धर्मको कारणले भएको होइन । पश्चिम पाकिस्तान उता र पूर्वी पाकिस्तान अर्कैतिर भएकाले तिनीहरु प्राकृतिक रुपमै पनि धेरै अलग अलग भएकाले त्यो विभाजन स्वभाविक नै थियो । मुसलमान भएपनि पश्चिम बंगालमा बंगाली धेरै थिए र उनीहरुको संस्कृति पनि बंगाली नै थियो ।
नेपालमा तपाईको यो एजेण्डा पार लाग्ला ?
हामी यहि विश्वासका साथ अघि बढिरहेका छौं । शान्तिपूर्ण ढंगबाट जनताको विश्वास जितेर एक न एक दिन यसलाई स्थापित गराउन सक्छौं भन्ने हामीलाई लाग्छ ।
तर यहि एजेण्डा बोकेका नेपालमा अन्य शक्ति पनि छन, यसरी ततपाईहरुले फरक फरक नाङ्लो पसल जस्तो किन पार्टी चलाइरहेको ? गोलबन्द हुनु पर्दैन ?
म वास्तवमा के कुरामा आफ्नो सफलता पनि ठान्छु भने हिजो संविधानसभामा धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा मत हालेका शक्तिसमेत आज हिन्दूधर्मको पक्षमा आउनुभएको छ । जहाँसम्म देशमा आज संवैधानिक रुपमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता छ र यसको पक्ष र विपक्षमा जनताको ठूलो पंक्ति विभाजित छ भन्ने कुरा पनि सबैलाई थाहा छ । हामीले उठाउँदै आएको हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको विचार पनि मन्थन हुन दिनुपर्छ ।
तर देशमा अहिले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता चाहने जमात ठूलो छ ?
यो मैले राम्ररी बुझेको छु । तर यो नयाँ कुराको कार्यान्वयन सँगसँगै देशमा जुन बिकृति र बिसंगति बढिरहेका छन्, त्यसलाई समाधान गर्ने क्रममा हामीले एउटा विकल्प दिइराखेका छौं । यसमा के भ्रम नहोस् भने हामीले पुरानो व्यवस्थामा फर्किने भनेको होइन । परिवर्तनकारी र परम्परागत शक्तिबिचमा एउटा सामञ्जस्यता कायम गरौं भन्ने हो । अहिलेको भन्दा पनि अझ बढि शशक्त लोकतन्त्र कायम गरौंं, तर राष्ट्रियता र एकताको प्रतिकको रुपमा राजसंस्थालाई पनि केहि स्पेस दिउँ भन्नु प्रतिगामी विचार होइन । यो मध्यमार्गी र अग्रगामी विचार हो । त्यसैगरि धर्मनिरपेक्षता होइन कि धार्मिक स्वतन्त्रता र समानता कायम गरौं । ९४ प्रतिशत जनताको पहिचानको रुपमा हिन्दूराष्ट्र कायम गरौं । हाम्रा मुख्य सवाल यिनै हुन ।
हिन्दूधर्मका नाममा तपाई सत्ताको वरिपरि घुमिरहने गरेको आरोप छ । राजतन्त्रको वकालत गर्ने व्यक्ति गणतन्त्रमा पनि मन्त्री बन्न छोड्नुभएन । राजतन्त्रको मुद्दा तपाईकाे देखाउने दाँत मात्रै हो भन्नेहरु धेरै छन्, त्यसप्रति के भन्नुहुन्छ ?
कतिपय विरोधी र सर्वसाधारणले पनि त्यस्तो भनिरहेको मैले पनि सुनेको छु । ४० वर्षको इतिहासमा ९ पटक मन्त्री हुनु कुनै ठुलो कुरा होइन । राष्ट्र र जनतालाई काँधमा कोकेर हिंडिरहेका छौं । टपक्कै टिपेर मन्त्री बनेको होइन । पञ्चायती र बहुदलीय व्यवस्थामा पनि चुनाव जितेरै आएको थिएँ । र आजको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि म एक्लै सुटुक्क आएको छैन । जनताकै अभिमतबाट हामी संसदमा पुगेका हौं । हामीले नैतिकताको आधारमा राजिनामा पनि दिएका छौं । कतिपयले यो किन बुझ्दैनन् भन्ने लाग्छ ।
द भ्यू विचारमन्थन